Ungayifaka njani ithegi kwi-Instagram | Iindaba zeGajethi
Indlela yokumaka kwi-Instagram
I-Instagram iyeyona nethiwekhi yoluntu ithandwayo ngalo mzuzu. Kuwo wonke lo nyaka, uninzi lwemisebenzi emitsha kunye Iinkonzo ezintsha kwinethiwekhi yoluntu. Zonke ziyilelwe ukunika usetyenziso olongezelelweyo. Nangona eyona njongo yabasebenzisi abaninzi isekufakeni iifoto zokwabelana nabahlobo babo.
Xa ufaka iifoto kwi-Instagram, sinethuba lokumakisha ezi foto. Le yeyona nto uyenzileyo. Nangona abo basebenzisi bathatha amanyathelo abo okuqala kwisicelo, kunokuba yinto entsha. Ke ngoko, sichaza ukuba yintoni na kwaye isetyenziswa njani apha ngezantsi.
1 Yintoni emakisha ifoto kwi-Instagram
2 Indlela yokuthega iifoto
2.1 Ithegi ngaphambi kokuthumela
2.2 Ithegi emva kokuposa
Yintoni emakisha ifoto kwi-Instagram
Ukumakisha okanye ukumakisha sisenzo esiqhelekileyo kwinethiwekhi yoluntu eyaziwayo. Xa sifaka ifoto, singongeza iithegi, ukuze abanye abantu okanye iiprofayili kwinethiwekhi yoluntu zikhankanywe kumfanekiso lowo. Ukuba ufaka ifoto kwi-Instagram apho uphuma khona nomhlobo wakho, ukuba loo mntu uneprofayile kwinethiwekhi yokuncokola, unokumakisha. Ke ungabona okuphuma kuloo foto. Singayenza ngazo zonke iiakhawunti kwinethiwekhi yoluntu.
Yinto eyenzeka rhoqo xa umntu efuna ukubonisa uphawu lwemveliso ethile ayithengileyo. Ke, bayayifaka uphawu kwifoto, kwimveliso, ukuze abantu abanomdla bakwazi. Imalunga ne isixhobo esinokuba luncedo kakhulu.
Ukusukela nangoku abasebenzisi bafuna ukuzinyusa bayisebenzisa rhoqo kwi-Instagram. Umzekelo, ukuba umfoti ufaka ifoto evela kwindawo ethile, kuqhelekile ukuba bamake iphepha elisemthethweni lesiza esithile kuloo foto. Ke, unokufumana ukubonakaliswa kwaye iphepha liyakuqaphela umsebenzi waloo mntu, ke kunjalo Enye indlela yokufumana abalandeli.
Kungumsebenzi kuwo Unokufumana okuninzi kuyo nge-Instagram. Ke ngoko, kulungile ukwazi ukuba ungayisebenzisa njani, njengoko inokukunceda. Kwiprofayile yakho kwinethiwekhi yoluntu, phezulu, ngaphezulu nje kweefoto. Ungabona ukuba upapasho lwakho luphuma, ezo uzigcinileyo kunye neefoto abakuthegi ngazo ngaxa lithile. Ke kulula ukuyibona ngalo lonke ixesha.
Nangona sisixhobo esiluncedo kakhulu, kuya kufuneka ukhumbule ukuba kukho umda weethegi kwifoto nganye. I-Instagram ivumela Ithegi ephezulu yeakhawunti ezingama-20 kwifoto oyilayishayo. Akukho bume bokubhala ngaphezulu. Nangona kunjalo, kuya kufuneka ulumkele ukumakisha abantu abaninzi, ukuba ufuna ukuzinyusa. Kuba ukumakisha abantu abaninzi kujongeka ngathi kukugaxekile.
Indlela yokuthega iifoto
Ukuba ufuna ukusebenzisa umsebenzi wokumakisha kwi-Instagram, yinto elula ukuyenza. Inethiwekhi yentlalo isinika iindlela ezimbini malunga noku xa ufaka ifoto. Singayenza kwinkqubo yokufaka ifoto kwinethiwekhi yoluntu, ngaphambi kokuba siyipapashe. Kodwa, sinethuba lokufaka ithegi kwifoto nasemva kokuba ipapashiwe.
Ke singasebenzisa lo msebenzi nangaliphi na ixesha. Apha siyakubonisa kunokwenzeka njani ukuba uyenze kwezi meko zimbini sinikwa ziintanethi.
Ithegi ngaphambi kokuthumela
Xa ufaka ifoto kwi-Instagram, kuya kufuneka uhambe uthotho lwamanyathelo ngaphambi kokuba ifoto ipapashwe kwiprofayile yakho. Sinethuba lokuhlela lo mfanekiso ngeendlela ezahlukeneyo, ngeefilitha okanye ngokuguqula ubungakanani befoto. Elinye lamanyathelo ekufuneka uwalilandele ngaphambi kokuba ulayishe ikuvumela ukuba umake ifoto ebuzwayo. Uya kubona ukuba ifoto yetekisi yokubhaliweyo iyavela kwiscreen, njengoko sikubonisa kumfanekiso ongezantsi.
Apha uya kuba nakho ukumakisha bonke abantu obafunayo, uthathela ingqalelo akhawunti ukuba ubuninzi bufumaneka kwiiakhawunti ezingama-20. Ukuze ukwazi ukumaka umntu, kuya kufuneka ucofe ifoto, naphi na apho ufuna khona, okanye kumntu othile ukuba ufuna ukumaka. Ayisiba bantu bodwa, unokumakisha iimpawu okanye nayiphi na iakhawunti ekwi-intanethi.
Xa usenza oku, ufumana isicatshulwa ubuza ukuba ngubani umntu ekuthiwa ufuna ukumaka. Okulandelayo, into ekufuneka uyenzile kukubhala igama leakhawunti yaloo mntu uza kumakisha. Emva koko ukhetha iakhawunti kwaye sele umthembisile lo mntu. Phinda inkqubo kaninzi kangangoko kufuneka. Nje ukuba inkqubo igqityiwe, uya kuyinika isimboli? kwaye unika okuchukumisayo kokugqibela kwifoto (isicatshulwa, njl.njl) kwaye ilungele ukulayishwa kwinethiwekhi yoluntu.
Ithegi emva kokuposa
Njengoko besitshilo ekuqaleni, i-Instagram iyakuvumela maka ifoto emva kokuba uyiposile. Kule meko, indlela yokufezekisa ilula ngokwenene. Kufuneka uye kwifoto oyilayishe kwiprofayile yakho. Kuya kufuneka ufake olo papasho.
Emva koko, cofa kumachaphaza amathathu athe nkqo avela kwinxalenye ephezulu yesithombe. Xa usenza oku, kuthotho lwezinto onokukhetha kuzo kwiscreen. Enye yezi ndlela kukuhlela ifoto, Yeyona nto inomdla kuthi kule meko. Uya kubona ngoko, ukuba kwifoto uya kuba nakho ukumaka abanye abantu.
Ke unokumaka abanye abantu okanye ungabeki umntu omtheke ngempazamo kule foto. Kwakhona, nje ukuba ugqibile ngenkqubo, kuya kufuneka ucofe i icon? Ngale ndlela, umake ifoto kwi-Instagram emva kokuyithumela. Kule meko sinomda weelebheli ezingama-20 ubuninzi. Le yinto engatshintshiyo kwinethiwekhi yoluntu.
Ayinamsebenzi ukuba indala kangakanani okanye intsha yenze ifoto kwi-Instagram. Uya kuhlala ukwazi ukuyihlela kwaye ungeze iithegi ezintsha, okanye ususe ezinye ukuba yile nto uyifunayo. Njengoko ubona kuyinto elula ukuyiphumeza.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Tutorials » Indlela yokumaka kwi-Instagram
Uyifaka njani intengiso eWallapop
Uhlalutyo lwe-Samsung Galaxy Watch, uluhlu lweepremiyamu lwewindows